“ချစ် သော ကေ” အ ပိုင်း(၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » “ချစ် သော ကေ” အ ပိုင်း(၁)
“ချစ် သော ကေ” အ ပိုင်း(၁)
Posted by aye.kk on Jul 5, 2012 in My Dear Diary | 8 comments
နွေ ဦး ရာ သီ လေး က ၊ အ လွန် ပျော် ရွှင် ကြည် နှူး စ ရာ ကောင်း လွန်း လှ ပါ သည်။
တ ပေါင်း နွေ က အ လွမ်း ဓတ် ခံ ကို အား ဖြည့် လို့ နေ သ ယောင် ယောင် ပင်။
ရွှေ တိ ဂုံ တ ပေါင်း လ ပြည့် နေ့ည က ၊ ဘု ရား ဖူး ရန် အ စီ စဉ် ရှိ သ ဖြင့် ပျော် နေ သူ က တော့ ကေ
တ ယောက် ဟု ပြော ရ မည် ဆို လျှင် မှား မည် မ ထင် ပါ ။
အ မြဲ တန်း ရောက် ဘူး သည် ဆို ပေ မဲ့ ၊ တ ပေါင်း လ ပြည့် နေ့က ဖူး ခွင့် မ ကြုံ ဘူး သေး ပါ ။ သွား ရ မည် ဆို တော့ ကေ တ ယောက် ရင် တွေ ခုန် ကာ ပျော် လွန်း နေ မိ သည် ။
လူ အုပ် ချင်း ကွဲ သွား နိုင် မည် ကို စိုး သ ဖြင့် ၊ အ ဒေါ် က အ ထပ် ထပ် မှာ နေ ရှာ ပါ သည် ။ လူ ချင်း အ တွဲ မ ဖြုတ် ရန် ။ သေ သေ ချာ ချာ လက် ကို မြဲ မြဲ ကိုင် ဆွဲ ဖမ်း ဆုတ် ထား ရန် ။စိတ် မ ချ နိုင် လွန်း သ ဖြင့် ၊ ပူ ပင် စိတ် လွန် ကဲ မှု တွေ နှင့် အ တူ ၊ အ ဒေါ် က မ လွှတ် ချင် ချင် ဖြစ် နေ ပါ သည် ။
ည နေ ခင်း ထ မင်း စား သောက် ပြီး စီး သည့် အ ချိန် ၊ အ ပြင် ဖက် လှမ်း မျှော် ရင်း ကြည့် မိ တော့ ဗု ဇွန် ဆီ ရောင် တိမ် တောင် ၊တိမ် တိုက် တွေ က မြင် မြင် သ မျှ လှ ပ လွန်း လှ သည် ။ ဒီ အ ချိန် ဆို…..ရင် ပြင် မှာ အ ရမ်း လှ နေ မှာ ဟု စဉ်း စား မိ ရင်း ၊ အ ဒေါ် က ရွှေ တိ ဂုံ စေ တီ အား ၊ ည မှ သာ သွား ရောက် ဖူး မျှော် ရန် ပြော သ ဖြင့် ၊ အိမ် အ ပြင် ဖက် သို့ ၊ လှမ်း ငေး မော ကြည့် နေ မိ ခဲ့ ခြင်း ဖြစ် ပါ သည် ။ အောက် ကို ငုံ့ ကြည့် တော့ ကား သေး သေး လူ သေး သေး လေး တွေ ဘဲ လှမ်း မြင် တွေ့ နေ ရ ပြီး ၊တိမ် တွေ က လည်း ကောင်း ကင် ကို ဆေး ပန်း ချီ နှယ် ရေး ခြယ် နေ သ လို ပင် ။ အ ရောင် စုံ တွေ ဖြင့် တောက် ပ နေ တာ ကြည် နှူး ဘွယ် ရာ ကောင်း လွန်း နေ ၍ ၊ ဘယ် ဆီ ကို လွမ်း မှန်း မ သိ အောင် ပင် ၊ စိတ် ခံ စား ရ ပါ သည် ။ အ ချိန် ကို ကုန် အောင် စောင့် နေ ရင်း က ၊ ဘု ရား သွား ဖို့အ သင့် ပြင် ဆင် ထား ရန် ၊ အ ၀တ် အ စား လဲ ထား ရန် အ ဒေါ် က လှမ်း ပြော လိုက် မှ သာ အ တွေး ရပ် ပြီး ၊ ကိုယ် လုပ် စ ရာ ကိ စ္စ များ ကို သွား လုပ် လိုက် ပါ သည်။
ဘု ရား သွား မည် ဖြစ် ၍ ၊ အစ် မ ဖြစ် သူ ၏ လုံ ခြည် နှင့် အ င်္ကျီ ကို ကောက် စွပ် နေ မိ ပါ သည် ။ ဘု ရား က စ ကဒ် ၀တ် သွား ၍ မ ဖြစ် ပါ ။ အ ဒေါ် က လည်း ခွင့် မ ပြု ။
ဖက် ဖူး ရောင် လုံ ချည် နှင့် ရေ ခဲ သား အ င်္ကျီ ၀ါ နု နု အ ပေါ် တ ပိုင်း က ဇာ အ ၀ါ နု ရောင် ၊ ရင် ပတ် ဖြတ် ဆက် က လေး ကို သာ ကောက် ၀တ် လိုက် ရ ပါ သည် ။ တော် သော အ င်္ကျီ က တ ထည် မျှ ပင် မ ရှိ ။ အစ် မ ၏ အ ကျဉ်း ဆုံး ဖြစ် သည့် အ င်္ကင်္ျီ ၊ ကိုယ် နှင့် တော် သည့် အ င်္ကျီ ကို သာ ယူ ပြီး ကောက် စွတ် လိုက် ရ သ ဖြင့် ၊ အ ဒေါ် က ၊ ကေ့ အား ဘု ရား သွား တာ လုံ လုံ ခြုံ ခြုံ မ ရှိ ဟု ဆို ပြီး လှမ်း မြင် ပြီး ဆူ ပါ သည် ။ ဘု ရား သွား ချင် သည့် စိတ် က လည်း တား ဆီး မ ရ ပါ ။ ၀တ် ၍ တော် သည့် အ င်္ကျီ က လည်း တ ထည် မျှ မ ရှိ ။ အ ခု ၀တ် ရ သည့် အ င်္ကျီ က လည်း ၊ ကေ လုံး လုံး ကြည့် မ ရ သည့် အ င်္ကျီ ၊ အ လွန် မုံး သည့် အ င်္ကျီ တ ထည် ပင် ။
ထို အ င်္ကျီကို အစ် မ ၀တ် တာ မြင် တုံး က ဆို လျှင် ၊ မိ ဘ နှင့် တိုင် ပြော ပြီး တစ် ချိန် လုံး ကဲ့ ရဲ့ နေ တတ် သည့် အ င်္ကျီ တ ထည် ပင်။ ဘု ရား လိုက် ချင် သ ဖြင့် ၊ မ သက် မ သာ ၊ မ တတ် သာ တော့ ဘဲ ထို အ င်္ကျီကို သာ ၊ ကေ ၀တ် ပြီး လိုက် ခဲ့ ရ ပါ တော့ သည် ။
အ ဒေါ် က ဘု ရား ဆီ မီး ထွန်း ပူ ဇော် ရန် မြေ ခွက် လေး များ ၊ မြေ ခွက် ထဲ တွင် ထည့် ထွန်း ရန် ဖ ရောင်း တိုင် များ ။ ဂြိုလ် သက် မွေး နေ့များ မေး ပြီး ၊ ကိုယ် တိုင် ထွန်း ညှိ မီး ပူ ဇော် ရန် ၊ အ သေ အ ချာ ရေ တွက် ၍ ထည့် ပေး လိုက် ပါ သည် ။
မ ၀တ် ဘူး သည့် အ င်္ကျီ ၊ ကို ၀တ် ပြီး လိုက် ခဲ့ ရ သည့် စိတ် ဒုက္ခ ။ ယောက် ကျား လေး ရှပ် အ င်္ကျီ သာ အ ၀တ် များ ပြီး ၊ မိန်း မ ၀တ် ဘ လောက် စ် အ င်္ကျီ က မ ရှိ ။ ရှိ တာ ၀တ် ပြီး လိုက် ခဲ့ ရ သည့် ကေ ၏ စိတ် ဆင်း ရဲ မှု ကား ဖော် ပြ လို့ ပင် မ တတ် စွမ်း သာ နိုင် တော့ ပါ ။
ခက် သည် က ၊ အ ဒေါ် က သူ ၏ သား ဖြစ် သူ နှင့် သား ချွေး မ ထည့် ပေး ပြီး ခါ မှ အ လည် ရောက် နေ သည့် တူ တော် မောင် ပါ လိုက် ခဲ့ ချင် သည် ဟု တောင်း ဆို မှု အ ရ ထည့် ပေး ပါ သည် ။
အ ဒေါ် က..
ပြော ပြော ဆို ဆို ဖြင့်….အား လုံး က မာင် နှ မ တွေ ဘဲ ၊ နယ် က ရောက် နေ သူ တော သူ စစ် စစ် ကေ က တော့ ဘယ် မှ မ သွား တတ် ၊ မ လာ တတ် ပျောက် သွား လို့က တော့ မ ဖြစ် ။ သူ့အ ဖေ ကို တော့ ငါ ကြောက် သည် ဟု ပြာ ပါ သည် ။ ကေ့ အား ကြည့် ပြီး ၊ အစ် ကို တွေ လက် ကို သေ သေ ချာ ချာ ဖမ်း ဆုတ် ပြီး ဆွဲ ထား နော် ။ လက် ကို မ လွှတ် နှင့် ဟု ပြော ပါ သည် ။ ချွေး မ ဖြစ် သူ (၉) လ အ ရွယ် က လေး ကို ပါ ၊ ဘု ရား ခေါ် သွား ချင် သည် ဟု တောင်း ဆို ခဲ့ သ ဖြင့် ၊ ချွေး မ က က လေး တ ဖက် နှင့် ဖြစ် နေ ၍ မောင် ၀မ်း ကွဲ တော် သူ ထံ ၊ ကေ့ အား လက် ဆွဲ ထား ထား ရန် ၊ တ ပေါင်း လ ပြည့် နေ့ဖြစ် ၍ ဘု ရား မှာ အ နယ် နယ် အ ရပ် ရပ် က ဆင်း လာ ကြ ပြီး ၊ ဆီ မီး တစ် ထောင် ပူ ဇော် ထွန်း ညှိ ကြ သ ဖြင့် လူ က ကြက် ပျံ မ ကျ စည် ကား သိုက် မြိုက် နေ မည် ဖြစ် ၍ ကေ့ အား မ ပျောက် အောင် လက် ဆွဲ ထား ဟု တာ ၀န် ပေး ပါ တော့ သည် ။
ကေ က အ င်္ကျီ နှင့် အ နေ ရ ခက် နေ သည် က တစ် မျိုး ၊ ကိုယ် နှင့် က အ ဒေါ် နှင့် ဘဲ ပတ် သက် သည် ။ အ ဒေါ် ယော က်ျား ဘက် က တော် သူ တူ နှင့် က ဘာ မျှ မ ပတ် သက် ။ တစ် ပူ ပေါ် တစ် ပူ ဆင့် ၍ စိတ် ညစ် နေ သူ က ကေ ဖြစ် ပါ သည် ။ ပေါက် သည့် န ဖူး မ ထူး တော့ သည့် အ တူ တူ ၊ လိုက် ချင် တုံး က တ ကဲ ကဲ ၊ နန်း မ တော် မယ် နု ထက် သဲ ဆို သ လို ၊ အ မျိုး မျိုး ဝေ ဖန် ခံ ရ မည် စိုး ၍ လိုက် ခဲ့ မိ ပါ တော့ သည် ။
ဖူး မျှော် ချင် ခဲ့ သည့် ရွှေ တိ ဂုံ အား လှမ်း မြင် ရ သည့် ခ ဏ ၊ စိတ် ဆင်း ရဲ မှု တို့အ ဝေး သို့လွင့် စင် ထွက် ပြေး ကွယ် ပြောက် သွား ခဲ့ ပါ သည် ။ တန် ခိုး ကြီး လှ သည့် မြတ် ရွှေ တိ ဂုံ အား လှမ်း မြင် မြင် ချင်း ပင် ၊ လက် စုံ ဆယ် ဖြာ လက် အုပ် ချီ လျှက် က အ ဝေး မှ ပင် အ ရင် လှမ်း ဖူး လိုက် မိ ပါ သည် ။
အ ဒေါ် ချွေး မ က ပါး စပ် မှ ရုတ် တ ရက် နှုတ် သ ရမ်း လိုက် ခါ ။ ငါ့ မောင် က ဘု ရား ဖူး ချင် တာ မှ ဟုတ် ရဲ့လား ။ ဘု ရား ဖူး ရင်း လိတ် အု ပါ တူး မ လို့လား ဟု မ ထင် မှတ် ဘဲ ပြော လိုက် သော စ ကား ကြောင့်။ အစ် ကို မှ သူ့မိန်း မ အား လွန် စွာ ဒေါ ကန် သွား ပါ သည် ။ သူ့ မိန်း မ အား ဒေါ သ ဖြင့် လှမ်း ကြည့် ရင်း နှင့် မင်း ကို ဒီ လို မိန်း မ စား မျိုး လို့အစ် ကို လုံး ၀ မ ထင် မှတ် ထား မိ ဘူး ဟု ပြော ပါ သည် ။
အစ် ကို မိန်း မ လည်း ပါး စပ် ပိတ် ရက် ဖြစ် သွား ခဲ့ ရ ပါ တော့ သည် ။ အား လုံး လည်း ဓါတ် လှေ ခါး တွင် စီး ရ တော့ မည် ဖြစ် ၍ လူ အုပ် ထဲ တွင် တိုး ဝှေ့ ယင်း နှင့် ပင် ၊ နှစ် ခြမ်း ကွဲ သွား ပါ သည် ။ ဓါတ် လှေ ခါး ထဲ အ ရောက် တွင် တော့ ၊ အ ဒေါ် တူ က ကေ့ အား မ ထင် မှတ် ပဲ ရင် ခွင် ကြား ထဲ ဆွဲ သွင်း လိုက် ပါ သည် ။ အ ခြား လူ များ နှင့် ထိ မိ သွား မှာ စိုး ၍ ဟု ပြော ပါ သည် ။ ကေ့ အား ရင် ပတ် ကြီး ဖြင့် မိုး ပြီး ၊ လူ အ များ နှင့် မ ထိ မိ စေ ရန် ကာ ထား ပေး ပါ သည် ။ ကေ က လည်း လူ အ များ ကြား ညှပ် နေ ခါ လှုပ် ၍ ပင် မ ရ တော့ ပါ ။ တစ် ခါ တစ် ခါ အ ဒေါ် ၏ တူ ၊ မျက် လုံး များ အ ကြည့် က ကျ ရောက် လာ ခါ ၊ ရ ရဲ့ လား ဟု တော့ မေး ပါ သည် ။
ကေ က ပြန် ဖြေ မည့် စ ကား မ ရှိ ပါ ။
ဘု ရား ဖူး ချင် သည့် ၊ စိတ် ဒု က္ခ ဖြစ် ပါ သည် ။
ဓါတ် လှေ ခါး ဖွင့် ဖွင့် ခြင်း ပင် ၊ လက် နှင့် ကေ့ အား ဖမ်း ဆုတ် ထား လျှက် က လမ်း လျှောက် ယင်း နှင့် ပင် ဘု ရား ရင် ပြင် သို့ရောက် လာ ကြ ပါ သည် ။
လ က်ျာ ရစ် တ ပါတ် ပတ် ပြီး မှ ၊ မွေး နေ့နံ ဂြိုလ် ခွင် အ ရပ် ၌ ဆီ မီး ထွန်း ညှိ ပူ ဇော် ခဲ့ ယင်း ။ ထို နေ့က အိမ် ပြန် ရောက် တော့ မော မော နှင့် အိပ် ပျော် သွား ပါ သည် ။ အိပ် မ ရ သူ က တော့ အ ဒေါ် ၏ တူ ပင် ဖြစ် ပါ သည် ။ အ ဒေါ် က ကေ့ ဓါတ် ပုံ အ လှ များ အား အ တော် များ များ ကို ကေ့ အ ဖေ က ပေး ထား သည် ကို ၊ ကေ က လုံး ၀ မ သိ ရှိ ထား ပါ ။ အ ဒေါ် တူ က ဓါတ် ပုံ များ ကို မ မျှော် လင့် ထား ပဲ နှင့် ဘီ ဒို ထဲ ရှိ အ င်္ကျီ အား အ ဒေါ် မှ ယူ ခိုင်း ခဲ့ သ ဖြင့် ဓါတ် ပုံ များ ထွက် ကျ လာ ခါ ၊ တွေ့မြင် သွား ယင်း ၊ အ ဒေါ် အား အစ် အောက် ပူ ဆာ ခါ ၊ ထို ည က မ ရ မ က မေး မြန်း ခဲ့ သည် ဟု ပြော ပြ ပါ သည် ။
အ ဒေါ် က မ တတ် သာ သည့် အ ဆုံး ဖွင့် ဟ ခါ ပြော ပြီး ၊ ပါး စပ် ပိတ် ထား ခိုင်း သည် ကို ကေ သိ လိုက် ရ ပါ သည်။
ဓါတ် ပုံ များ တွေ့ရ စဉ် က ၊ လွန် စွာ အံ့ အား သင့် လျှက် ကြက် သေ သေ သွား မိ ခဲ့ သ လို ဖြစ် သွား ခဲ့ သည် ဟု အ ဒေါ် ၏ တူ က ပြော ပြ ပါ သည် ။ ကေ နှင့် အ ဒေါ် တူ တို့ နှစ် ယောက် က ၊ တစ် အိမ် ထဲ တွင် မ ထင် မှတ် ဘဲ လာ ဆုံ ကြ ပါ သည် ။
မ နက် ရောက် တော့ ၊ အ ဒေါ် က မ နက် ခင်း စား ရန် ကော် ဖီ မုန့် ကျွေး တော့ ။ အ တူ ဆုံ ကြ ပါ သည် ။ မ နက် ခင်း အ ဒေါ် တို့မိ သား စု က ၀န် ထမ်း တွေ ဆို တော့ ကိုး နာ ရီ ထိုး အ ပြီး ၊ အ သီး သီး ရုံး သွား သ ဖြင့် အိမ် မှာ နှစ် ယောက် သား အိမ် စောင့် ဖြစ် မှန်း မ သိ ဖြစ် ခဲ့ ကြ ပါ သည် ။ ဖတ် စ ရာ များ ဂျာ နယ် ၊ သ တင်း စာ ၊ ၀ထ္ထု စာ အုပ် များ အ ပြင်း ပြေ ဖတ် ရန် မ နက် ထဲ က အ ဒေါ် က စား ပွဲ ပေါ် တွင် လာ ချ ထား ပေး ခဲ့ ပါ သည် ။
အ ဒေါ် တူ က တော့ စစ် တု ရင် သွား ရှာ လာ ခဲ့ ခါ ၊ စစ် တု ရင် ဆော့ ရန် အ ဖော် ညှိ ပါ တော့ သည် ။
ကေ က လည်း စစ် တု ရင် ၀ါ သ နာ အိုး ဆို တော့ အ ဖော် ညှိ ဖို့ မ လို ။ နှစ် ယောက် သား ရှုံး သည့် သူ က န ဖူး ထိတ် အား လက် နှင့် တောင့် ကြေး ဆို ခါ က စား ကြ ပါ တော့ သည် ။ မ ဆော့ ခင် တော့ နာ မည် မေး ကြ ၊ မိတ် ဖွဲ့ကြ နှင့် လိပ် စာ တွေ အ သီး သီး မေး ကြ ရင်း…..၊ အ ဒေါ် တူ က အ ရင် မေး ပါ သည် ။
နာ မည် ဘယ် လို ခေါ် လည်း ဟင်…
တ ကယ် လား ဟု ထပ် မေး ပါ သည် ။
အိမ် က ပေး ထား သည့် နာ မည် မ ဟုတ် ။ အိမ် က ပေး သည့် နာ မည် က ရုပ် ဆိုး သည် ။ ကိုယ့် ဘာ သာ ကိုယ် ကြိုက် ၍ ပေး ထား တာ ဟု ဖြေ မိ ပါ သည်။
ဒါ ဆို ရင် ကို့နာ မည် လည်း ပြော ပြ ဦး လေ….။
ကိုယ့် နာ မည် က“သု ခ” ပါ ။
“သု ခ” ……နှစ် လုံး တည် လား ။
ဒု က္ခ ရဲ့ဆန့်ကျင် ဖက် ပေါ့ ၊နာ မည် က လှ တယ် နော် ၊ ယုံ စေ ချင် ရင် ၊ မှတ် ပုံ တင် ပြ လေ ၊ ပြ မှ ယုံ မယ် ဟု အစ် ကို သု ခ အား စ နောက် မိ လိုက် ပါ သည်။
အစ် ကို သု ခ က တော့ ၊ တ ကယ် ထင် မှတ် သွား ခါ ၊ မှတ် ပုံ တင် သွား ယူ လာ ပြီး ၊ ထုတ် ပြ ခဲ့ ပါ သည် ။
ဒါ ဆို နာ မည် အ စစ် က “သု ခ”ပေါ့ နော် ။ ကာ ရံ ညီ သွား အောင် ၊ ဦး ဘ ချစ် ရဲ့ချစ် ဒုက္ခ တော့ မ ဖြစ် စေ နဲ့ဦး နော် ဟု နောက် လိုက် မိ ပါ သည် ။ နှစ် ဦး သား လည်း သ ဘော ကျ စွာ ဖြင့် ပင် ပြိုင် တူ ရယ် မော လိုက် မိ ကြ ယင်း….။
အ ဒေါ် နေ့ခင်း ရုံး ဆင်း ပြန် လာ ချိန် အ ထိ ၊ နှစ် ယောက် သား စစ် တု ရင် ထိုင် ဆော့ နေ ကြ ပါ သည် ။ သူ ရှုံး လိုက် ကိုယ် နိုင် လိုက် နှင့် နှစ် ယောက် သား န ဖူး ပြင် တွေ ရဲ ရဲ နီ တွတ် သွား ကြ ပါ သည် ။ န ဖူး ပြင် အား ၊ အား မ နာ တမ်း တောက် ခဲ့ ကြ ခြင်း ဖြစ် ၍ ၊ နှစ် ဦး သား လုံး ၏ ၊ န ဖူး များ ကျိန်း စပ် ကုန် ကြ ပါ သည် ။
နေ့ခင်း အ ဒေါ် ရောက် လာ တော့ ထ မင်း ပြင် ကျွေး ခဲ့ ပါ သည် ။
ထ မင်း စား ပြီး ချိန် ၊ အစ် ကို သု ခ က၊ ရုတ် တ ရက် ခ ဏ ပျောက် သွား ပါ သည် ။
အ ဒေါ် ရုံး မ ဆင်း ခင် ၊ လေး နာ ရီ မ တိုင် မီ လေး တွင် ၊ ဓါတ် ပုံ လေး တ ပုံ အား ၊ မှန် ဘောင် အ ၀ိုင်း လေး ပြု လုပ် ပြီး ၊ ယူ လာ ပြ ပါ သည် ။ ဘယ် သူ့ပုံ လည်း သိ ချင် လား ဟု မေး ပါ သည် ။ မှန် အောင် ပြော နိုင် ရ မယ် ဟု ဆို ပါ သည် ။
ကို သု ခ က ..
ကေ့ အ ကြိုက် လိုက် ခါ ၊ ကေ လို့ ဘဲ ခေါ် ပါ သည် ။
ကေ က တော့ သူ့ကို အစ် ကို သု ခ ဟု သာ သုံး နှုံး မိ ပါ သည် ။
အစ် ကို သု ခ တ ယောက် ပျောက် သွား တာ ၊ ဘာ လုပ် နေ လည်း မှတ် တယ် ။ ကြိုး စား ပမ်း စား ဓါတ် ပုံ မှန် ဘောင် အ ၀ိုင်း လုပ် ပြီး ၊ ဓါတ် ပုံ ထည့် နေ တာ ကိုး …ဟု ပြော မိ လိုက် ပါ သည် ။
အစ် ကို သု ခ က….
မှန် အောင် ပြော နိုင် လျှင် ပေး မည် ဟု ပြော လျှင်…..
ပ ဟေ ဠိ လုပ် နေ ပြန် ပါ ပြီ …
ကြည့် ချင် သည် ဟု ပြော ပြီး ၊ အစ် ကို သု ခ လက် ထဲ မှ အ တင်း ဆွဲ လု ရာ ၊ အစ် ကို သု ခ က လည်း အိမ် ထဲ ရှိ ဧည့် ခန်း အ တွင်း လှည့် ပတ် ပြေး ပါ တော့ သည် ။
မ မျှော် လင့် ပဲ နှစ် ယောက် သား တူ တူ ပုန်း တမ်း ဆော့ နေ သည် နှင့် တူ နေ ပါ တော့ သည်။ ပြေး သူ က ပြေး ၊ လိုက် သူ က လိုက် နှင့် နှစ် ယောက် လုံး ချွေး များ ရွှဲ ရွှဲ စို နစ် ကုန် ပြီး ၊ နှစ် ဦး လုံး မော ဟိုက် ကြ လျှက် က ၊ ဟော ဟဲ ဟော ဟဲ နှင့် အ သံ များ ထွက် သည် အ ထိ ပင် ။ နှစ် ယောက် သား ဆက် မ ပြေး နိုင် တော့ မှ သာ ၊ ဆက် တီ ထိုင် ခုံ တွင် ၀င် ထိုင် လိုက် ကြ ရ ပါ သည် ။
ဆက် တီ ခုံ လေး တွင် နှစ် ယောက် သား ထိုင် ရင်း က ၊ အစ် ကို သု ခ မှ ချွေး များ သုတ် ရန် သ ဘက် တ ခု ထ ယူ ပေး ပြီး ၊ ချွေး များ သုတ် ပစ် ခိုင်း ပါ သည်။
ခ ဏ အ ကြာ တွင် ၊ အစ် ကို သု ခ က ….စ ကား စ လာ ပါ သည်။
မှန် အောင် မ ပြော နိုင် ပါ က ခိုင်း သည့် အ တိုင်း လုပ် ရ မည် ဟု ဆို ပါ သည် ။
ကေ က လည်း မောင် ရင်း နှ မ ၊ အစ် ကို ရင်း ညီ အစ် မ ရင်း စိတ် ထား နိုင် လျှင် လုပ် မည် ဟု ပြော ပြ မိ ပါ သည် ။
ကေ က မှန် အောင် မ ပြော နိုင် ၍ ရှုံး သွား ပါ သည် ။
အစ် ကို သု ခ က ၊ ကေ့ အား မျက် စေ့ မှိတ် ထား နော် ဟု….ပြော ပြီး ၊ စက္ကန့် မျှ ပင် မ ရှိ သည့် လျှင် မြန် ခြင်း နှင့် အ တူ ၊ ကေ့ န ဖူး ပြင် အား တ ချက် မျှ နမ်း လိုက် ပါ သည် ။
ရုတ် တ ရက် အ ငိုက် မိ သွား သည့် သူ က….. ကေ ဖြစ် ပါ သည် ။
ဘယ် နေ ရာ မ ဆို သိ ချင် နေ သည့် ကိစ္စ ၊ တန် ဘိုး ကြီး စွာ ပေး ဆပ် လိုက် ရ သည် ဟု ထင် ပါ သည် ။
ဓါတ် ပုံ က ထင် မ ထား သည့် ၊ ကေ့ ပုံ ဖြစ် နေ ပါ သည် ။
အံ့ အား သင့် စွာ ဖြင့် ၊ ကို သု ခ အား မေး မိ ပါ သည် ။
ကို သု ခ က …..
ဒီ ဓါတ် ပုံ က ဘီ ဒို အံ ဆွဲ ဖွင့် ရင်း အောက် ကို လျှော ကျ နေ ခဲ့ တာ ။ အ ဒေါ် အား ပြန် မ ပေး ပဲ လှ လွန်း သ ဖြင့် သိမ်း ထား ခဲ့ မိ သည် ဟု ၀န် ခံ ပြီး ကေ့ အား ပြော ပြ ခဲ့ ပါ တော့ သည် ။ အ ရင် က လည်း ဓါတ် ပုံ တွေ ထဲ မှာ အ ရမ်း ရင်း ရင်း နှီး နှီး မြင် ဘူး နေ မိ သည် ဟု လည်း ပြော ပြ ပါ သည်။
ဓါတ် ပုံ နောက် ကျော မှန် အ ၀ိုင်း နောက် က ၊ သ တ္တှု အ ပါး ကပ် ထား ပြီး နောက် ကျော တွင် နာ မည် လေး ရေး ထိုး ထား ပါ သည်။
“ချစ် သော ကေ” စာ လုံး လေး သုံး လုံး မျှ ပင် ဖြစ် ပါ သည် ။ တ သက် လုံး သိမ်း ထား မည် ဟု ဆို ပါ သည်။
ကေ မှ လည်း အစ် ကို သု ခ နော် ။ စ ကား နောက် တ ရား ပါ ။
မ နက် က ပဲ ပြော နေ သေး တာ နော် ။ သု ခ မ ဖြစ် ပဲ ၊ ဦး ဘ ချစ် ရဲ့ချစ် ဒုက္ခ တ ကယ် ဖြစ် သွား မှာ နော် ဟု ၊ အ တည် ပေါက် နှင့် ပင် ထပ် မံ ပြော ပစ် ခဲ့ လိုက် မိ ပါ သည် ။
အမရေ…အမရဲ့ ပို့စ်အားလုံးကဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဗျ…ကျွန်တော်လဲyahoo game မှာ
အမြဲ chess ထိုးတယ်ဗျ…
နောက်ထပ် အပိုင်း တွေ ထပ်တင်ပေးပါဗျို့ ….
စစ်တုရင် ထိုးတဲ့သူ၊ ၀ါသနာပါတဲ့သူတွေက အင်မတန် ဥာဏ်ကောင်းကြတယ်။
အိမ်မှာလည်း မောင်လေးက အရမ်းဝါသနာပါတယ်။
သူနဲ့ကစားမယ့်သူမရှိလို့ အမတွေကို အတင်းခေါ်ပြီး ကစားတယ်။
ကျမကတော့ ခေါင်းမနိုင်လို့ လုံးဝ ၀ါသနာမပါဘူး။
အဲဒါ ကစားနိုင်တဲ့ အမငယ်ကို တစ်ပွဲကစားရင် ၅ကျပ် ၁၀ ကျပ် ပေးပြီး ကစားကြတယ်။
အန်တီအေး ရေ ငယ်သူတို့အချစ်မို့ ငယ်သူမို့ မသိပါဆိုတဲ့ ကားလေးကို သတိရမိတယ်။
ချက်ကတော့ ခုထိ မကစားတတ်ဖူး။ တခါလောက်တော့ ကစားဖူးချင်တယ်။ သူများတကာတွေ ကမ္ဘာ့ စစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲတွေ ဘာတွေ လုပ်နေတာ တီဗွီမှာ လာရင် ဘာတွေ ရွှေ့နေမှန်း မသိလို့ ။ သူတို့ကတော့ သဲကြီး မဲကြီး ရွှေ့နေကြတာ။ ကြည့်ရတာ ကျမက ဥာဏ်မကောင်းလို့ ထင်ပါရဲ့။
ဇာတ်လမ်းလေး ကို မျက်စိ ထဲမြင်သာအောင် ရေးနိုင်တယ်။
အဝတ်အစား ဆို အရောင်လေးတွေပါ တွဲမြင်နိုင်တယ်။
အစ်မ ဘဝ က သိပ်ပျင်းဖို့ ကောင်းတဲ့ ပုံမပေါ်ခဲ့ဘူး။
အားလုံးမှာ စိတ်ဝင်စား စရာတွေချည်းဘဲ။
နောက်လာမဲ့ အပိုင်း ကို စောင့်နေပါတယ်။ :-)